China Inoveli Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit abavelisi kunye nabathengisi | Umda weBio
Inoveli coronavirus yintsholongwane ye-RNA, equlathe iiproteni kunye neecicic acid. Intsholongwane ingena kumzimba womntu (umntu), ingena kwiiseli kwindawo ebophayo ehambelana ne-receptor ACE2, kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphendule kwiintsholongwane zangaphandle kwaye ivelise izilwa-buhlungu ezithile. Ke ngoko, i-vial nucleic acid kunye neeantigen, kunye neentsholongwane ezithile ngokuchasene nenoveli coronavirus inokuthiyori ingasetyenziswa njengezinto ezithile zebhayomarker zokufumanisa inoveli coronavirus. Ukufumanisa i-nucleic acid, itekhnoloji ye-RT-PCR yeyona isetyenziswa kakhulu.
Inoveli Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit yenzelwe ukuba isetyenziselwe ukufezekisa ubungakanani be-SARS_CoV-2 ye-virus ye-RNA ekhutshwe kwi-nasopharyngeal swabs, oropharyngeal swabs, isikhohlela kunye ne-BALF kwizigulana ezidibene ne-FDA / CE Inkqubo yokukhupha i-IVD kunye namaqonga e-PCR akhethiweyo adweliswe apha ngasentla.
Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe ngabasebenzi abaqeqeshiweyo elebhu
Esi sixhobo se-PCR sibuthathaka kakhulu, silungele ukusetyenziswa siyafumaneka kwifomathi ye-lyophilized (inkqubo yokumisa okomileyo) yokugcina ixesha elide. Ikhithi inokuhanjiswa kwaye igcinwe kubushushu begumbi kwaye izinzile unyaka omnye. Ityhubhu nganye ye-premix iqulethe zonke ii-reagents ezifunekayo ekukhuliseni i-PCR, kubandakanya i-Reverse-transcriptase, Taq polymerase, i-primers, i-probes kunye ne-dNTPs Ifuna kuphela ukongeza amanzi ayi-13ul afakwe amanzi kunye ne-5ul ekhishwe itemplate ye-RNA, emva koko inokuqhutywa kwaye yandiswa kwizixhobo zePCR.
Umatshini we-qPCR kufuneka ahlangabezane nezi mfuno zilandelayo:
1. Fit 8 strip PCR ityhubhu yevolumu 0.2 ml
2. Yiba nemijelo engaphezulu kwesine:
IiDayi ezenziwe kwangaphambili
FAM, SYBR Luhlaza I
Inkqubo ye-PCR yokwenene, i-Biorad CF96, iCycler iQ ™ Inkqubo yeXesha leXesha lePCR, iStratagene Mx3000P, Mx3005P
Ubunzima bokuhanjiswa kwetyathanga ebandayo yeNoveli Coronavirus nucleic acid yokufumanisa i-reagent
Xa ii-reagents eziqhelekileyo zokufumanisa i-acid zihanjiswa kumgama omde, (-20 ± 5) storage ukugcinwa kwekhenkethi ebandayo kunye nokuhamba kuyafuneka ukuqinisekisa ukuba i-enzyme esebenzayo kwi-reagents ihlala isebenza. Ukuqinisekisa ukuba iqondo lobushushu lifikelela kumgangatho, iikhilogram ezininzi zomkhenkce owomileyo ziyafuneka kwibhokisi nganye yovavanyo lwe-acid ye-reagent nokuba ingaphantsi kwe-50g, kodwa inokuhlala iintsuku ezimbini okanye ezintathu kuphela. Ngokombono wokuziqhelanisa nomzi mveliso, obona bunzima be reagents ekhutshwe ngabavelisi bungaphantsi kwe-10% (okanye ngaphantsi kakhulu kuneli xabiso) lesikhongozeli. Uninzi lobunzima buvela kumkhenkce owomileyo, iipakethe zomkhenkce kunye neebhokisi zegwebu, ke iindleko zokuhamba ziphezulu kakhulu.
Ngo-Matshi 2020, i-COVID-19 yaqala ukugqabhuka kwinqanaba elikhulu phesheya, kwaye imfuno yeNoveli Coronavirus nucleic acid yokufumanisa i-reagent inyuke kakhulu. Ngaphandle kweendleko eziphezulu zokuthumela ngaphandle ii-reagents kwitsheyini elibandayo, uninzi lwabavelisi basengayamkela ngenxa yobuninzi kunye nenzuzo ephezulu.
Nangona kunjalo, ngokuphuculwa kwemigaqo-nkqubo yelizwe yokuthumela ngaphandle iimveliso ze-anti-bhubhane, kunye nokuphuculwa kolawulo lukazwelonke ekuhambeni kwabantu kunye nolungiselelo, kukho ulwandiso kunye nokungaqiniseki ngexesha lokuthuthwa kwezenzi, ezikhokelele kwiingxaki ezibonakalayo zemveliso ezibangelwe. ngokuhamba. Ixesha lokuhambisa elandisiweyo (ixesha lokuhamba malunga nesiqingatha senyanga liqhelekile) kukhokelela ekusilekeni kwemveliso rhoqo xa imveliso ifikelela kumthengi. Oku kuyikhathaze kakhulu into yokufumana imveliso yamashishini e-reicent nucleic acid.
Itekhnoloji yeLyophilized ye-PCR reagent incede ukuhanjiswa kweNoveli Coronavirus nucleic acid yokufumanisa i-reagent kwihlabathi liphela
Ii-reagents ze-PCR ezine-lyophilized zingahanjiswa kwaye zigcinwe kubushushu begumbi, elinokuthi linganciphisi kuphela iindleko zokuhamba, kodwa liphephe neengxaki ezisemgangathweni ezibangelwa yinkqubo yothutho. Ke ngoko, ukwenza i-lyophilizing reagent yeyona ndlela ilungileyo yokusombulula ingxaki yezothutho lwangaphandle.
I-Lyophilization ibandakanya ukubandisa isisombululo kwisimo esomeleleyo, emva koko uthabathe kwaye uhlukanise umphunga wamanzi phantsi kwemeko yokucoca. Isinyibilikisi esomileyo sihlala esityeni esenziwe ngendlela efanayo kunye nomsebenzi Xa kuthelekiswa nezinto ezenziwa ngolwelo oluqhelekileyo, icandelo elipheleleyo eline-lyophilized Novel Coronavirus nucleic acid detection reagent eveliswe yiLinging Bio inezi zinto zilandelayo:
Ukuqina kobushushu: Ngaba unokunyanga ngokuma kuma-56 ℃ kangangeentsuku ezingama-60, kwaye i-morphology kunye nokusebenza kwe-reagent kuhlala kungatshintshi.
Ukugcinwa kweqondo lobushushu eliqhelekileyo kunye nokuhamba: akukho mfuneko yetyathanga elibandayo, akukho sidingo sokugcina kubushushu obuphantsi ngaphambi kokuba uvule, ukhulule ngokupheleleyo indawo yokugcina ebandayo.
Ukulungele ukusetyenziswa: I-lyophilizing yazo zonke izinto, akukho mfuneko yokuqwalaselwa kwenkqubo, ukunqanda ukulahleka kwezinto ezinobumba obuphezulu njenge-enzyme.
Iithagethi ze-Multiplex kwityhubhu enye: ekujolise kuko ekufumaneni kugubungela inoveli ye-coronavirus ORF1ab, ufuzo lwe-N, ufuzo lwe-S ukuthintela isifo segciwane. Ukunciphisa ukungalunganga kubuxoki, uhlobo lomntu lwe-RNase P lusetyenziswa njengolawulo lwangaphakathi, ukuze kuhlangatyezwane nemfuno yeklinikhi yolawulo lomgangatho wesampulu.
Iincwadana zePCR / MSDS
I-PCR IFU USA i-EUA
Uxwebhu lwenyani kukhathalelo lwempilo
Iincwadana zePCR 3.0
Uxwebhu lwenyani lwesigulana
Egqithileyo I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yovavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody
Okulandelayo: Uvavanyo lweSARS-CoV-2 lwe-Antigen ekhawulezayo
I-Multiplex Real-Time Pcr Kit
Inoveli yeCoronavirus (Sars-Cov-2) Multiplex Real-Time Pcr Kit
I-Sars-Cov-2 Rna Real-Time Pcr Kit
Isixhobo esinezixhobo ezimbini zeSOSS-CoV-2 Imbovane ...
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yovavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody
ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi,